Ogaden News Agency (ONA) – Cyril Ramaphosa oo Loo Dhaariyay Xilka Madaxtinimada Koonfur Afrika.
Cyril Ramaphosa oo Loo Dhaariyay Xilka Madaxtinimada Koonfur Afrika.
Posted by ONA Admin	/ February 16, 2018
Madaxa cadaalada ee dalka Koonfur Afrika, Mogoeng Mogoeng ayaa xilka madaxweynaha ee dalka Koonfur Afrika u dhaariyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi, imikana ah madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa.
Baarlamaanka dalka Koonfur Afrika oo kulan ku yeeshay magaalada Cape Town ayaa Cyril Ramaphosa u doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi. Mr Mogoeng Mogoeng ayaa ku dhawaaqay in Ramaphosa loo doortay madaxweynaha dalka, iyadoo aysan jirin cid kula loolantay kursiga.
Ramaphosa oo madaxweyne ku xigeen ahaa ayaa sida uu sharcigu qaba noqonaya madaxweyne ku xigeen marka uu madaxweynuhu xilka baneeyo. Wuxuu xilkan sii hayn doonaa ilaa iyo inta baarlamaanka dalkaasi uu madaxweyhne cusub ka dooranayo.
Mr Ramaphosa ayaa badalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo khudbad uu ka jeediyay telefeeshinada ka sheegay in uu is casilay. Cyril Ramaphosa waa siyaasi ganacsade ah, tan iyo bishii Disembar na soo hogaaminayay xisbiga ANC. Waxaa uu xafiiska la wareegayaa iyadoo xisbiga ANC iyo shacabka dalkaasi ay kala qaybsanyihiin, sidookale na dhaqaalaha wadankaasi uu sii liicayo.